Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeer ku tagay Garoonka Balli-doogle (Sawirro) – Banaadir Times
By banaadir 31st May 2018 179 No comment
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kormeer ku tagay Garoonka Balli-doogle ee Gobolka Shabeellaha Hoose, oo ah saldhig Ciidamada Mareykanka ku tababaraan ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee loo yaqaano Danab.
Garoonka Balli-doogle oo ahaa garoon Milateri ayaa hada waxaa xero ciidan oo ay qeybna kaga sugan yihiin Ciidamada AMISOM, Ciidamo Kumaandooska Soomaaliya iyo Ciidan Mareykan ah oo aan tiradooda la ogeyn.
Kormeerka Ra’iisul Wasaaraha ku tagay xeradaas ayaa ahaa kii labaad, isagoo sanadkii hore sidan u booqday, waxaa kormeerka maanta ku wehliyay Wasiirka cusub ee Gaashaandhigga Xasan Cali, Abaanduulaha Ciidamada xoogga dalka iyo Mas’uuliyiin kale.
Ra’iisul Wasaaraha oo la hadlay ciidamada ayaa kula dardaarmay inay ka qeyb qaataan difaaca dalka
Mareykanka ayaa dhowaan ballaarin ku sameeyay garoonka Balli-doogle oo ah meel istiraatiiji ah, waxaa u qeybsan yahay dhowr qeybood oo isugu jira qeybo diyaaradaha ka soo degaan iyo qeybo kale.
Dowladda Somalia oo sheegtay in Duqeyn Saakoow ka dhacday lagu dhawacay Hoggaamiye sare oo Shabaab ah